MOTO HOSE PURE uye CABINET Vatengesi uye Fekitori - China MOTO HOSI Reel NEKABHINETI Vagadziri
Tsananguro: Moto Hose Reels akagadzirwa uye akagadzirwa kutevedzera BS EN 671-1: 2012 ine semi-rigid hose inoenderana neB BS EN 694: 2014 zviyero.Fire hose reels inopa inodzivirira moto nzvimbo neinoramba ichipiwa mvura inowanikwa ipapo ipapo. Kuvakwa uye mashandiro e hosi yemoto reel ine semi-rigid hose inovimbisa yakakodzera kuiswa muzvivakwa uye mamwe mabasa ekuvaka kuti ashandiswe nevagari. Moto hose reels inogona kushandiswa pasina kumisidzana kwekugadzira wi ...
Tsananguro: Hose rack gungano iri mukati mezvivakwa pakanyorova kana pakaoma riser outlet Iyo inoratidzira rack mune iyo yakaturika iyo layflat moto hosipaipi (30m) uye kubatanidza, kamwene, hosipaipi rack kurudyi kona vharuvhu, hosi rack rack munyatso. inobvumidza mvura kuyerera nepombi mushure mekubviswa kwepombi uye kamwene.Rack inowanikwa muhukuru hwe1.5 "uye 2.5" .Pane nzira mbiri dzekukwirisa hosipaipi. Imwe ndeye kushandisa bracket yemadziro uye imwe yacho ndeye kugadzirisa kune kurudyi kona v ...
Moto hose reel kabati
Tsananguro Iyo hosi yemoto reel kabati inogadzirwa neyakaonda simbi uye inonyanya kuiswa pamadziro. Zvinoenderana nemaitiro, pane maviri marudzi: kuzorora kwakakwidzwa uye kumadziro kwakakwidzwa. Isa moto unodzima moto, chokudzimisa moto, kamwene kemoto, vharuvhu nezvimwewo mukabati maererano nezvinodiwa nevatengi Kana makabati akagadzirwa, epamberi laser yekucheka uye otomatiki ekutengesa matekinoroji anoshandiswa kuona yakanaka yechigadzirwa mhando. Zvese zviri mukati nekunze kwekabineti zvakapendwa, zvinobudirira pre ...